China zonxibelelwano kunye nezinto zokwenza izinto zefektri mveliso kunye nabenzi | Yongjie
Ingxubevange Main kunye nomsindo:
Ngo-1060 O / H12 / H14 / H22
Izicelo: iselfowuni / ilaptop, isemiconductor / chip, isikhululo sesiseko se5G
Itafile yealuminiyam ene-anodised yenziwe ioksijini, kwaye umaleko obhityileyo wealuminium oxide ubunjwe ngaphezulu, ubukhulu bayo buyi-5-20 yee-microns, kunye nefilimu enzima ye-anode oxide inokufikelela kwi-60-200 microns.
Ingxubevange yeAluminiyam: 1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3005, 5005, 5052
Iimpawu zealuminium ene-Anodized:
1.Ukuqina kunye nokunxiba ukumelana kwepleyiti yealuminiyam ene-oxidized iphuculwe ukuya kuma-250-500 kg / mm2.
2.Ukuchasana nobushushu obuhle, indawo yokunyibilika yefilimu enzima ye-oxide ifikelela kuma-2320K.
3. Ukugquma okungathethekiyo, ukumelana namandla ombane wokonakala ukuya kuthi ga kwi-2000V.
4. Umsebenzi wokulwa umhlwa uyandiswa, kwaye awuzukubola ku r = 0.03NaCl ityuwa yokutshiza ngamawaka eeyure.
5. Umphumo wombala ulungile. Kukho inani elikhulu lee-microspores kwifilimu encinci ye-oxide, enokufumana izinto ezahlukeneyo zokuthambisa, ezifanelekileyo ukwenza iisilinda zeinjini okanye ezinye izinto ezinganyangekiyo; Ifilimu inesikhundla esomeleleyo sokuthengisa kwaye inemibala eyahlukeneyo kwaye inemibala emihle.
Ibhodi ye-alumina engama-5052 yeqokobhe lemveliso ye-elektroniki:
I-5052 ipleyiti yealuminium ihlala isetyenziswa kwiqokobhe leemveliso ze3C, inezi zinto zilandelayo, landela iYongjie ukujonga.
Izinto eziluncedo: 5052 ipleyiti yealuminium inoxinano oluphantsi, ukusasaza okuhle kobushushu, ukuqina okuhle, ukusetyenziswa kwexesha elide, akukho lula ukukhubazeka, ukumelana nokubola, okuhle ngombala, kulula ukuba umbala, kwaye unokutshintsha ube yimibala eyahlukeneyo ngenkqubo yonyango yomphezulu ukongeza ubumnandi kwiimveliso zombane. Ukuxinana okuphantsi kukwenza iimveliso ze-elektroniki zithwale, iimveliso ezininzi zekhompyuter zamanqaku zisebenzisa itekhnoloji ye-aluminium-magnesium alloy casing.
Amacwecwe e-aluminium oksijini asetyenziswa kuhambo lukaloliwe, izithuthi zeemoto, ukuhambisa ngenqanawa, izixhobo zombane, ulwakhiwo kunye nokubumba kobunjineli, njl.
Egqithileyo Isixhobo esitsha seZicelo zaMandla
Okulandelayo: Izixhobo ezilula zokufaka izinto
Umbane wefoyile ye-elektroniki